Ny ady ao Afovoany Atsinanana sy ny valinteny mizarazaran’ireo blaogera indoneziàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2019 17:22 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2006)
Mamerina ny lohatenin'ireo media iraisam-pirenena mikasika an'ireo fifandirana misy ankehitriny eo Afovoany-Atsinana ifanaovan'i Israely ary i Libanona, sy eo amin'i Israely sy Palestina, lahatsoratra miresaka lohahevitra mitovitovy amin'izany no avoakan'ireo Indoneziana blaogera arahany amin'ireo fanehoankevitra sy valinteny isan-karazany; ireo mpomba sy ireo mpanohitra, ny fanohanana sy ny fanamelohana avy amin'ny lafiny roa.
Teny anivon'ireo Indoneziana Miozolomana blaogera, niraradraraka niraisan'ny rehetra ny fanamelohana an'ireo habibiana nataon'i Israely tamin'ireo sivily tao Libanona.
Heverin'i Ummi Hani ho toy ny fahafatesan'ny eritreritra sy ny fahatsiarovan-tsaina avy amin'i Israely ireo fanafihana anjambany ireo. Toy ny heloka an'ady tsy azo amindràna fo atao amin'ny zanak'olombelona no iheveran'i Triaji ny Israely hatrizay sy izay ataony. Manontany tena ny Sun of Day hoe nahoana i Israely no dia manana fo tsy antra mamono sivily marobe izay vehivavy sy ankizy avokoa ny ankamaroany. Ahiahiany ho manana tanjona iray hafa ao an-dohany i Israely: hanao an'i Libanona ho Palestina hafa iray.
Manoratra i Agusti Anwar ao amin'ny Opinion Counts manao hoe:
Ny marina, tsy nanana fotoana hihatsaràna mihitsy ny fifandirana misy eo amin'i Israely-Palestina fa miharatsy hatrany. Ny fanafihana Israeliana vao haingana tao Qana any Libanona, niteraka fahafatesana olona sy faharatrana tamin'ireo sivily, no ratsy indrindra nataon'i Idraely hatreto. Zaza tsy manantsiny avokoa ny ankamaroan'ireo 54 maty hita tao ambany korontana. An'arivony maro ireo olona naparitaka sy nafindra fonenana noho ny antony fiarovana. Noho ny fahalevonan'ny fireneny, tezitra mafy ny Praiminisitra Libaney Fuad Siniora, kristianina, ka nanameloka an'i Israely ho sahala amin'ny mpanao heloka bevava an'ady. Betsaka ireo elanelam-panahy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena no nanameloka an'ity herisetra ataon'i Israely amin'ny olombelona ity, morona iray hafa ratsy dia ratsy izay mametraka ny maha olona ho eo amoron'ny tsy fanànany henatra
Dhika, avy amin'ny Blaogin'ny Vondrom-piarahamonina Indoneziana Miozolomana dia mangataka hetsika amin'ireo Indoneziana blaogera rehetra amin'ny alalan'ny fametrahana sora-baventy ao anatin'ireo blaoginy tsirairay avy manao hoe “Manameloka an'i Israely ireo Indoneziana blaogera “. Ireto manaraka ireto ny antony arosony:
Volana manan-danja ny Aogositra, 61 taona lasa izay, Indonezia firenenay no nanambara ny fahaleovantenany. Sahala amin'izay voalaza ao anaty Sasintenin'ny Lalàmpanorenana niaingantsika tamin'ny 1945, inoanay fa manan-jo hahazo fahafahana avokoa ny firenena tsirairay. Fanitsakitsahana mibaribary ny zon'olombelona ny hetraketraka ataon'i Israely amin'i Palestina sy Libanona. Ny hetraketraka Israeliana ara-tafika tsy an-drariny dia fanitsakitsahana tafahoatra ny lalàna iraisam-pirenena, anisan'izany ny lalàna momba ny zon'olombelona, izay mandràra mazava ny fikendrena an'ireo vahoaka sivily (tsy mpiady). Ampolony ireo zaza maty nandritra ny fanafihana ara-miaramila Israeliana tao Libanona sy tao Palestina. Ny vahoaka sivily no mitondra ny vesatr'ireo fanafihana ara-miaramila ataon'i Israely. Tsy misy teny hafa fa i Israely no fositr'ireo olana ao Afovoany-Atsinanana.
Mino izahay fa misy vahaolana avokoa ny olana rehetra, saingy kosa tsy amin'ny alalan'ny famonoana ankizy sy sivily. Hetsika ara-moraly ity hanehoana amin'izao tontolo izao fa isika, Indoneziana blaogera, dia manameloka an'ireo habibiana ataon'i Israely ary tokony hatsahatra tsy misy hatak'andro ny herisetra ataon-dry zareo.
Rehefa voalaza izany, tahaka izay notsipihin'i Agusti Anwar, i Indonezia dia firenena iray izay ahitàna feo mizarazara; indrisy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Na dia vitsy an'isa aza, misy ireo feo sasantsasany izay manamarina ny hetsika Israeliana ao Afovoany-Atsinanana.
Patung ao amin'ny Indonesia Matters, ohatra, mitaraina ny “fitongilànan'ny” media Indoneziana amin'ny fandrakofana atao ny fifandirana mitranga ankehitriny ao Afovoany-Atsinanana:
Iray amin'ireo antony tena manaitra indrindra ao anatin'ireo fanadihadiana nataon'ny Indoneziana mpampahalala vaovao mikasika ny fifandirana, dia ny haavon'ny fitanilàna sy ny fiandaniana. Ny Detiknews.com manokana dia toa sahala amin'ny tsy mahavita milaza ny anaran'i Israely raha tsy atambatra an'io teny io ny hoe “mahery setra”. Na ny masoivohom-baovaom-panjakana, Antara aza, tsy afa-bela amin'izany.
Heveriny fa ny karazana fitanilàna tahaka izany ataon'ireo media dia mety hitarika amina fihenjanam-pihetsika eny amin'ireo Miozolomana Indoneziana.
Izay rehetra fivadihana ho henjam-pihetsika ataon'ireo Indoneziana Miozolomana dia mety azo heverina ho avy amin'ny fijerin'ny mpampahalala vaovao an'ireo trangan-javatra ao Afovoany-Atsinanana sy ireo trangan-javatra misy rahateo ihany koa. Tsy ilaina ny milaza fa ireo fanafihana fampihorohoroana miverimberina ataon'i Hamas sy ny Hezbollah, ankehitriny sy taloha, dia tsy nahaliana loatra an'ireo media Indoneziana, na niteraka fampiasana feno fahaiza-mamorona mpamari-toetra mampihetsi-po any anatin'ireo tatitra fanadihadiana.
Ireo fanehoankevitra ao anatin'ny lahatsoratra etsy ambony dia mametraka ahiahy amin'ny hatezeran'ireo Indoneziana Miozolomana manoloana ilay fifandirana
Avy amin'i Magy:
Fa nahoana no tena zava-dehibe ny fiombonan'ireo firenena Miozolomana sy ireo Arabo? Nahoana ny RI no tokony hamorona fifandraisana miaraka amina antoko sasantsasany nefa tsy misy akory ilàna ny tahaka izany? Nahoana no tsy misokatra ny IR ka mamorona fifandraisana amin'i Eoropa, Japana, Etazonia, Shina, India ary Arabo? Nahoana no ireo Arabo irery? Heveriko fa tsy misy dikany izany.
Avy amin'i Tony:
Firenena Hafahafa: miady ao Afovoany-Atsinanana miaraka amin'ireo Arabo, ary ao Maluku manohitra an'ireo Indoneziana, firaisankina amin'ireo olona miaina any amin'ny elanelana 10 000 km mandritra ny fandroahana sy ny fanenjehana an'ireo mpifanolo-bodirindrina toa an'ireo mpomba an'i Ahmedyyah, ireo Papous, ireo Timorey sy ny sisa. Amiko dia toa ny fivavahana no manan-danja be indrindra noho ny maripamantarana maha-olom-pirenena.
Avy amin'i O. Bule:
Sahala amin'izay nolazain'ireo Indoneziana havako, “ry Arabo Adala, inona no azonao lazaina mikasika azy ireo?” Tsy mila manaraka ny làlana tsy misy dikany tahaka izay arahan'ireo Arabo i Indonezia, hadalàna ny fanaovana an'izany. Avelao ireo Arabo sy ireo Israeliana hikaroka fomba iray hahafahana miara-miaina.